December | 2018 | University of Veterinary Science, Yezin
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍ ၂၀၁...	Read more
on: December 17, 2018 In: News / Events
Professor Dr. Aung Aung, Head of the Department of Physiology and Biochemistry receivedadelegation of professors from University of Queensland, Australia on 17th December, 2018. Prof. Aung...	Read more
on: December 05, 2018 In: News / Events
With the implementation of ACIAR, Department of Physiology and Biochemistry, University of Veterinary Science hosted project planning meeting on 5-6 December 2018. The participants from Live...	Read more
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရေဆင်း၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်များ အကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံရန် မြန်မာနိုင်ငံသား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား...	Read more